Dinosaur Animatronic, Puppets Dinosaur n'ezie - KaWah
Isiokwu Park imewe
Dinosaur na-eje ije na ọkwa
Dinosaur Aka Puppet
Animatronic Dinosaur na-agba ịnyịnya
Dinosaur na-eje ije
Eletriki Dinosaur na-agba
Ntugharị Skeleton Dinosaur
Ngwaahịa enyemaka Park
Ngwaahịa ahaziri ahazi
Ihe egwuregwu ụmụaka na ihe ncheta
Ụmụ ahụhụ Animatronic
Ogo kacha elu T Rex Animatronic Dinosaur Jurassic Park ..
Ezigbo Dinosaur Animatronic Triceratops Nha ndụ ..
Nnukwu ogologo olu Dinosaur Animatronic Brachiosaurus..
Ezigbo Dinosaur Animatronic Dinosaur Spinosaurus ..
Ihe ndozi Dinosaur Park dragọn Animatronic nwere isi atọ..
Ahapụrụ Big Gorilla Statue Animatronic Animal ..
Nha ndụ Animatronic Mammoth Statue Animatronic..
Animatronic igurube akpụrụ akpụ ụmụ ahụhụ ejiri aka mee Hazie..
Ihe oyiyi Animatronic Shark nke ejiri aka mee zụta ..
Ezigbo Animatronic Sarcosuchus Akpụrụ akpụ Animatronic ..
Ngwaahịa Ogige ntụrụndụ T-Rex Electric Dinosaur Equipment..
Ogige Ntụrụndụ Mkparịta ụka Haziri site n'aka onye nrụpụta.
Zụta ekike ije ije Raptor Animatronic Dinosaur Costume..
Zụta Ezigbo nwa Dinosaur Puppet ụmụaka ọkacha mmasị..
Ogige ntụrụndụ ụmụaka na-agba ịnyịnya eletrik na Dinosaur zụta Triceratops ..
Egg Animatronic Dinosaur ahaziri maka Dinosaur Park..
Ngwa ihe ngosi ihe ngosi Fiberglass Dinosaur Dinosaur Skull oyiri..
Isi Animatronic Dinosaur Ọrụ ahaziri ahazi na Cage..
Zụta ugwu mgbawa nke fiberglass n'ezie maka ogige isiokwu ire ere..
Ihe ngosi Kawah
Nke a bụ ogige ntụrụndụ dinosaur-Jurassic Adventure Theme Park na Romania.Dị ka onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ anyị esonyela na nkwurịta okwu na mkparịta ụka na ụlọ ọrụ imewe nke onye ahịa goro ka ọ rụchaa ọrụ ogige ntụrụndụ dinosaur a.Enwere ihe dịka 1.5 Ha, echiche bụ ndị ọbịa na-alaghachi azụ n'oge gara aga, gaa na kọntinent ọ bụla ebe ..
Na njedebe nke 2019, ọrụ ogige dinosaur nke Kawah na-aga nke ọma na ogige mmiri dị na Ecuador.N'afọ 2020, ogige dinosaur na-emeghe na nhazi, ihe karịrị 20 dinosaur animatronic akwadola maka ndị ọbịa nke ụzọ niile, T-Rex, carnotaurus, spinosaurus, brachiosaurus, dilophosaurus, mammoth, dinosaur ekike..
Paradaịs Jurassic Dinosaur Paradaịs, ebe izizi ime ụlọ mara mma na Hexi, sonye na Jiuquan Changqing Yuan na-abịa na 2021. Oké ifufe dinosaur na-enwetụbeghị ụdị ya na-eweghachi gị azụ n'oge Jurassic site na ijeri afọ.Egwuregwu nne na nna na nwa, ikiri ihe nkiri, mgbasawanye n'èzí, ahụmahụ na-emikpu nke oge ochie dị omimi.
Anyị bụ ụlọ ọrụ hi-tech nke na-achịkọta ọrụ nke imepụta, mmepe, mmepụta, ire, ntinye na ndozi maka ngwaahịa, dị ka: ụdị ịme anwansị eletriki, sayensị mmekọrịta na agụmakwụkwọ, ntụrụndụ themed na ihe ndị ọzọ.Isi ngwaahịa na-agụnye ụdị dinosaur animatronic, dinosaur na-agba ịnyịnya, anụmanụ animatronic, ngwaahịa anụmanụ mmiri..N'ime afọ 10 mbupụ ahụmahụ, anyị nwere ihe karịrị 100 ọrụ na ụlọ ọrụ, gụnyere engineer, ndị na-emepụta, technicians, ndị ahịa otu, mgbe-sale ọrụ na otu nrụnye.
Kedu nsogbu enwere ike idozi?
N'ime afọ 10 mbupụ ahụmahụ, anyị nwere ihe karịrị 100 ọrụ na ụlọ ọrụ, gụnyere injinia, ndị na-emepụta, technicians, ndị ahịa otu, mgbe-ire ọrụ na echichi otu.
Kedu ihe anyị ga-eme
Anyị na-emepụta ihe karịrị 300 iberibe dinosaur kwa afọ na mba 30.Mgbe Kawah Dinosaur rụsiri ọrụ ike na nyocha na-adịgide adịgide, ụlọ ọrụ anyị enyochala ihe karịrị ngwaahịa 10 nwere ikike ikike ọgụgụ isi nọọrọ onwe ya n'ime afọ ise.
Ndị otu nrụnye ọkachamara
Otu nrụnye anyị nwere ike ịrụ ọrụ siri ike.Ha nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe nrụnye esenidụt, ma nwee ike ịnye ntụzịaka nrụnye dịpụrụ adịpụ.
Ahịa ozugbo ụlọ ọrụ, uru ọnụahịa
Anyị nwere ike ịnye gị nhazi ọkachamara, nrụpụta, nnwale na ọrụ njem.Ọ dịghị intermediaries na-etinye aka, yana ọnụ ahịa asọmpi nke ukwuu iji chekwaa gị ọnụ ahịa.
Ahụmahụ bara ụba na oru ngo
Anyị emebela ọtụtụ narị ihe ngosi dinosaur, ogige ntụrụndụ na ọrụ ndị ọzọ, nke ndị njem nlegharị anya obodo hụrụ n'anya nke ukwuu.Dabere na ndị ahụ, anyị enwetawo ntụkwasị obi nke ọtụtụ ndị ahịa ma guzobe mmekọrịta azụmahịa ogologo oge na ha.
Ahụmahụ mmepụta otu maka ihe karịrị 10 afọ
Anyị nwere otu ọkachamara nke ihe karịrị mmadụ 100, gụnyere ndị na-emepụta ihe, ndị injinia, ndị ọrụ nka, ahịa na ọrụ mgbe-ahịa.N'inwe ihe karịrị akwụkwọ ikike ikike ọgụgụ isi nwere onwe nke iri, anyị abụrụla otu n'ime ndị nrụpụta kacha ibu na ndị mbupụ na ụlọ ọrụ a.
Ọmarịcha ọrụ mgbe-ahịa
Anyị ga-esochi ngwaahịa gị n'oge usoro a, nye nzaghachi oge, ma mee ka ị mara ọganihu zuru ezu nke ọrụ ahụ.Mgbe emechara ngwaahịa a, a ga-eziga otu ndị ọkachamara ka ha nyere aka.
Sistemụ mmesi obi ike
Anyị na-ekwe nkwa iji akụrụngwa dị oke mma.Teknụzụ akpụkpọ anụ dị elu, sistemụ njikwa kwụsiri ike, yana sistemu nyocha siri ike iji hụ na ngwaahịa ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya.
Demystified: Anumanu kacha efe efe n'ụwa - Quetzalcatlus.
N'ikwu okwu banyere anụmanụ kasị ukwuu nke dịworo n'ụwa, onye ọ bụla maara na ọ bụ blue whale, ma gịnị banyere anụ ọhịa kasị ukwuu?Cheedị echiche otu ihe dị egwu ma dị egwu ka ọ na-agagharị na apiti ihe dị ka nde afọ 70 gara aga, Pterosauria dị ihe dị ka mita anọ n'ịdị elu nke a maara dị ka Quetzal…
Ụdị Dinosaur Realistic ahaziri maka ndị ahịa Korea.
Kemgbe etiti Maachị, ụlọ ọrụ Zigong Kawah na-ahazi otu ụdị dinosaur animatronic maka ndị ahịa Korea.Gụnyere 6m Mammoth Skeleton, 2m Saber-toothed Tiger Skeleton, 3m T-rex head model, 3m Velociraptor, 3m Pachycephalosaurus, 4m Dilophosaurus, 3m Sinornithosaurus, Fiberglass S...
Kedu ọrụ nke "mma agha" dị n'azụ Stegosaurus?
Enwere ọtụtụ ụdị dinosaur bi n'ime ọhịa nke oge Jurassic.Otu n'ime ha nwere ahụ abụba ma jiri ụkwụ anọ na-eje ije.Ha dị iche na dinosaur ndị ọzọ n'ihi na ha nwere ọtụtụ ogwu mma agha ndị yiri fan n'azụ.A na-akpọ nke a - Stegosaurus, yabụ kedu ihe eji “s...
Gụọ blọọgụ anyị
Otu esi etinye iwu
Otu esi eme Dinosuar
Adreesị: Nke 78, Liangshuijing Road, Da'an District, Zigong City, Sichuan Province, China